Medical Spoons Uye Spatula
Mutengi anobva kuUK Akarairwa girazi chubhu bvunzo, pasi girazi bvunzo chubhu, murabhoritari girazi bvunzo chubhu kubva kwatiri
Mutengi anobva kuUK Akarairwa girazi chubhu bvunzo, pasi girazi bvunzo chubhu, murabhoritari girazi bvunzo chubhu kubva kwatiri. Iyi batch yezvigadzirwa yakakurumidza kuiswa mukugadzirwa. Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu uye kuvimba. Ini ndinotenda isu tinogona zvakare kumisikidza kwenguva refu-bhizinesi hukama. Isu tinogamuchirawo b ...
Mutengi anobva kuBulgaria Akarairwa Burette, Burette 100ml, Burette 50ml kubva kwatiri
Mutengi anobva kuBulgaria Akarairwa Burette, Burette 100ml, Burette 50ml kubva kwatiri. Iyi batch yezvigadzirwa yakakurumidza kuiswa mukugadzirwa. Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu uye kuvimba. Ini ndinotenda isu tinogona zvakare kumisikidza kwenguva refu-bhizinesi hukama. Isu tinogamuchirawo vatengi kuti vasvike cooperatio ...
Mutengi anobva kuAustria Akarairwa girazi girazi bvunzo chubhu, borosilicate girazi bvunzo chubhu, kutenderera pasi girazi bvunzo chubhu kubva kwatiri
Mutengi anobva kuAustria Akarairwa girazi girazi bvunzo chubhu, borosilicate girazi bvunzo chubhu, kutenderera pasi girazi bvunzo chubhu kubva kwatiri. Iyi batch yezvigadzirwa yakakurumidza kuiswa mukugadzirwa. Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu uye kuvimba. Ini ndinotenda isu tinogona zvakare kumisikidza kwenguva refu-bhizinesi hukama ...
Kushanda kwekufa: gadzira kofi ine beaker murabhoritari, akaenda kuICU mushure mekumwa
Kushanda kwekufa: gadzira kofi ine beaker murabhoritari, akaenda kuICU mushure mekunwa Kuedza kuchengetedza ndicho chinhu chakakosha kwazvo. Muviri une hutano chete uye nemuviri wakasimba ndipo panogona kuva nenyeredzi nemakungwa. Wese muedzo anofanirwa kuchengeta marabhoritari manejimendi manejimendi mundangariro, ...
Mutengi anobva kuBelgium Akaraira girazi beaker, girazi beaker 1000ml, borosilicate beaker 150ml kubva kwatiri
Mutengi anobva kuBelgium Akaraira girazi beaker, girazi beaker 1000ml, borosilicate beaker 150ml kubva kwatiri. Iyi batch yezvigadzirwa yakakurumidza kuiswa mukugadzirwa. Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu uye kuvimba. Ini ndinotenda isu tinogona zvakare kumisikidza kwenguva refu-bhizinesi hukama. Isuwo tinogamuchira kutenga ...
Yedu borosilicate beaker 100ml, beaker 250ml, mabheaker 100ml kubva kwatiri akarairwa neMutengi kubva kuSouth Korea, Ndatenda zvikuru kune yako rutsigiro uye kuvimba
Mutengi anobva kuSouth Korea Akaraira borosilicate beaker 100ml, beaker 250ml, mabheki 100ml kubva kwatiri. Iyi batch yezvigadzirwa yakakurumidza kuiswa mukugadzirwa. Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu uye kuvimba. Ini ndinotenda isu tinogona zvakare kumisikidza kwenguva refu-bhizinesi hukama. Isu tinogamuchirawo mutengi ...
Tinoshandisa sei volumetric flasks
Nhanganyaya Mhando dzakasiyana dzakasiyana dzemarabhoritari glassware dzinogona kushandiswa kugadzirira makemikari mhinduro. Iko kururamisa uye kunyatso kuve kwakanyanya kukosha, volumetric flasks ndiyo sarudzo yakanakisa. Chinu chakagadzirwa borosilicate girazi, riri zvinowanzoshandiswa nokuda kwayo chemi ...
Mutengi anobva kuSouth Korea Akarairwa mabheji ekuyera, anogadzira mabhegi egirazi, lab borosilicate beaker kubva kwatiri, Ndatenda zvikuru nerutsigiro rwako uye kuvimba
Mutengi anobva kuSouth Korea Akarairwa mabheji ekuyera, anogadzira mabhegi egirazi, lab borosilicate beaker kubva kwatiri. Iyi batch yezvigadzirwa yakakurumidza kuiswa mukugadzirwa. Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu uye kuvimba. Ini ndinotenda isu tinogona zvakare kumisikidza kwenguva refu-bhizinesi hukama. Isu ...
Mutengi kubva kuMalaysia Akarairwa buchner faneli, buchner fanera firita, buchner firita fanera kubva kwatiri
ne admin pane 21-09-17
Mutengi anobva kuMalaysia Akarairwa buchner faneli, buchner fanera firita, buchner firita fanera kubva kwatiri. Iyi batch yezvigadzirwa yakakurumidza kuiswa mukugadzirwa. Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu uye kuvimba. Ini ndinotenda isu tinogona zvakare kumisikidza kwenguva refu-bhizinesi hukama. Isu tinogamuchirawo bu ...